Ukuzilolonga nempilonhle - Bayede News
Namhlanje ngizothanda sidingide ubumqoka bokulolonga umzimba kwezempilo yengqondo nasekuphileni jikelele. Abantu abaningi babhekene nezinkinga eziningi kulokhu ukhuvethe lwagasela umhlaba wonke.
Abanye babhekene nokukhathala ngenxa yemibandela yemvalelwakhaya, abanye balahlekelwa imalingeniso, abanye bazama ukusimama emveni kokulahlekelwa okuhlukene. Lolu guquko olwenzeka emhlabeni wonke akulula ukuba ukwazi ukuhlangabezana nalo lungakwenza uzizwe ukhathele futhi kube nomuzwa wokulahlekelwa yithemba.
Kusemqoka ukuba ufune usizo lokwelulekwa ngakozokwelashwa ukuze uhambe lolu hambo lokusimama benawe uma izimpawu zinzima futhi kunzima ukumelana nazo. Bakhona labo abakhombisa ukukhathala ngenxa yoguquko olokhu lukhona kanye namagagasi obhubhane alokhu eqhubekile. Enye yezindlela yokubhekana nokukhathala nesithukuthezi sobuchopho ukuzilolonga njengengxenye yokwelapha.
Ukuzilolonga kukhombise ukubamba iqhaza elimqoka empilweni yomqondo ngalezi zindlela; ukuzilolonga kukhiqiza ama-endorphin ezingamahomoni akhiqizwa ubuchopho kanti ayasiza ekudambiseni ubuhlungu. Anomthelela wokudambisa izinhlungu.
Ukuzilolonga kukhombise ukukhiqiza iserothini ekwenza uzizwe uthakasile nedopamine ekwenza uzizwe ugqugquzelekile, wakekelile, ugxilile futhi ujabulile. I-dopamine iyakhiqizeka uma uphuze utshwala, uya ocansini, udla noma usebenzisa izihungane. Ubuchopho bubuye bukhiqize lokho okuvikela ubuchopho ekulimaleni.
Eqinisweni uma umuntu enokhwantalala olunzima lokhu kungasetshenziswa ukuhlola ukuthi ubuchopho bulimalile futhi buyasimama. Ukuzilolonga kukhombise ukukwazi ukulawula ukuthakasa ngokunciphisa ixhala nengcindezi eyisimbelambela. Ukuzilolonga kuthuthukisa ukuxhumana kwemizwa, umuntu angazibuza ukuthi kuyini khona lokho? Ukuxhumana kwemizwa ngamandla obuchopho ukwakha ukuxhumana uma umuntu efunda okusha.
Isibonelo, uma ufunda ukuthi kuphekwa kanjani, wakha okusha ozokulandela, yilokhu ubuchopho bakho obukuthatha njengokuqamathekile, ngakho-ke uma leli khono lizokuthatha izinyanga ezintathu, lesi sikhathi singancishiswa kakhulu ngoba umgudu wobuchopho wokwakha ukuxhumana uyashesha uma uzilololnga. Ukuzilolonga kubamba iqhaza ekukhuliseni ingxenye yobuchopho eyaziwa ngehippocampus okuyiyona ephathelene nokufunda nokukhumbula.
Ukukhula kobungako kobuchopho kusho ukukhula kokusebenza. Ngakho-ke izindaba ezimnandi ngoba kusho ukuthi ikhono lokufunda nokukhumbula liyakhula. Ungazibuza ukuthi ngempela lokhu kwenzeka kanjani? Izindlela ezahlukile zokuzilolonga zinomthelela ebuchosheni. Ngokwalo mbhalo, sizogxila ekulolongeni okuphathelene nenhliziyo. Lokhu kuzilolonga kwandisa izinga lokushaya kwenhliziyo okungadalwa ukubhukuda, ukugijima, ukudlwathuzela, ukugijima emshinini, ama-erobhikhi, ukushova nokunye.
Inhliziyo isitho esihambisa igazi emzimbeni wonke kubalwa nobuchopho. Lokhu kusho ukuthi uma udle ukudla okunomsoco okunamavithamini adingwa wubuchopho igazi lizowuletha lo msoco. Igazi liletha amandla adingwa wubuchopho, umoyampilo nakho konke okudingwa wubuchopho. Uma igazi liwuhlelo lokuthutha, isivinini salolu hlelo lubalulekile.
Uma umuntu engazilolongi kusho ukuthi lolu hlelo luhamba kancane. Kunjengokuthi uma inkampani yakho idinga amawolintshi angama-500 ngosuku ukuze isebenze kahle kodwa usebenzisa ibhayisikili ukuwaletha kusho ukuthi inkampani cishe ithola amawolintshi angama-50 ngosuku okusho ukuthi ukusebenza kusesimweni esibi kodwa uma uwaletha ngeloli ukusebenza kuyenyuka masinyane.
Wehlelwa ukwethenjwa uHulumeni ngenxa yenkohlakalo
Kanjalo nokuzilolonga, ukuzivocavoca kwenyusa izinga lokushaya kwenhliziyo kwenyuke ukuhamba kwegazi. Lokhu kwenzeka ngenqubo eyaziwa nge-angiogenesis, okuyinqubo yokuqubuka kwemithambo emisha kuleyo esuke ikhona ukwenyusa ukuhamba kwegazi. Ngakho-ke ukulolonga ngokuphathelene nenhliziyo kusemqoka.
Ukuzilolonga ekuseni kuhle kakhulu uma umuntu efuna ukugxila emisebenzini yosuku emhlalele futhi azuze lokho akuqondile. Uma uhlala endaweni enomoya ongcolile, ngicela ungazilolongi emgwaqeni ngoba kuzokulimaza kunokuba usizakale ebuchosheni, kungcono sebenzisa ijimu.
Nokho, uma uhlala endaweni enomoya ohlanzekile vele ungene umgwaqo ubuye ungene ikilasi lokuzivocavoca. Phokophelela impilo!!!
Zakhamuzi zaseNingizimu Afrika asinyakazeni ukuze siphile. Imithelela yokuzilolonga ingaphezu kokuqinisa izicubu kodwa iyedlulela ngisho nasempilweni yengqondo. Asenzeni kube yisiko lawo wonke umuntu ukuzilolonga. Asikwenzeni kube yimfashini ukuzilolonga.
nguDkt uLihle Qulu Oct 15, 2021